Etu esi ewepu ma bulie ihe omuma | Martech Zone
Etu esi ewepu ma kwalite ihe omuma
Infographics Ahịa abụwo ihe na-enye nlebara anya maka Martech. Nke ukwuu nke mere na m melite Alerts Google maka okwu infographic m na-enyocha ha ụbọchị niile. Ebe ọ bụ na infographics abụrụla ewu ewu, ụlọ ọrụ ọdịnaya jupụtara na ya ihe omuma ihe ojooYa mere, anyị mara mma banyere ihe anyị na-ekerịta ma ọ bụ na anyị anaghị ekerịta iji hụ na anyị na-enyekarị uru.
Kedu ihe bụ infographic?
Ihe kpatara 10 infographics kwesịrị ịbụ akụkụ nke usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị.
Gini mere ihe omuma ihe eji eme ahia di nma?
Etu esi enyocha ma mepụta ihe omuma?
Họrọ Fonts ziri ezi na agba maka Infographic gị
Kedu ihe na-eme nnukwu infographic?
Ihe omuma ihe omuma bu ihe di oke onu ahia imeputa na imeputa ihe, ihe kariri $ 2,500 na nke obula! Ahapụkwala ịgụ nke a, n'agbanyeghị! Ikwesighi imepụta ihe omuma ihe jiri ha mee ihe. A na-ahazi Infographics kpọmkwem iji kesaa… ya mere ịchọta ezigbo infographics ma tinye ha na saịtị gị ka bụ atụmatụ dị ukwuu. E wezụga na Alerts Google, enwekwara ụfọdụ saịtị dị ukwuu na-anakọta infographics. Nwedịrị ike ịnwale itinye aka gị ebe ahụ… ọtụtụ na-enye gị ohere ịgbakwunye akaụntụ!
Choo Infographics na ntanetị
Ihe omuma ndi di elu - onye nchikota ihe omuma Infographic.
Ihe omuma nke B2B - ihe omuma ihe omuma na ahia B2B.
Nkebi nke ise - ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ihe ọmụma mara mma.
Ihe omuma Cool - blọọgụ raara nye ịkekọrịta ihe ọmụma dị mma.
Infographic nke ụbọchị - saịtị sitere na Infographic World, onye mmepe nke infographics.
Graphs.net - saịtị ntanetị ọzọ maka infographics.
Inhụnanya Infographics - otu obere ndi ahia ahia intaneti ndi gbakotara imeputa uzo maka ihe omuma.
Ndepụta Infographic - blog raara nye ịkesa infographics.
Ihe Ngosiputa Infographics - Mkpokọta ihe omuma ihe omuma na ihe omuma nke oma na Web!
Ugbu a - nchịkọta infographics e mere maka ndị ahịa nke Nowsourcing.
Nyefee Infographics - nke Killer Infographics.
View.ly - nnukwu saịtị maka ịchọta na ịkekọrịta infographics.
Visual Loop - Mmiri na-enweghị nkwụsị nke Njikọ maka Infographics, Maps, Charts na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ahụ anya nke ụwa niile na-eme ka usoro ịghọta ndụ anyị dịtụ mfe… ma ọ bụ.
Voltier Creative - ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ infographic ọzọ dị ịtụnanya.
Ma lee otu isiokwu na 100 ihe omuma ihe omuma na ntanetị!
Etu esi ewe uru na ihe omuma
Ozugbo ichotara ihe omuma nke ichoro, gini?
Tinye ederede ederede nwere isi echiche gbasara infographic ahụ, ihe masịrị gị, yana ihe kpatara ị jiri kpebie ịkọrọ ya ndị na-ege gị ntị. Nchọgharị ọchụchọ enweghị ike ịgụ okwu na infographic, mana ha nwere ike ịgụ okwu ndị soro ya na saịtị gị. Dee ezigbo ọdịnaya ga-eme ka saịtị gị chọta… ọbụlagodi na ọ bụghị ozi infographic gị!
Detuo ma ọ bụ Embed? Otutu, a na-eziga infographics yana koodu iji tinye ihe omuma ahu ma kesaa ya na saiti gi (dika isi okwu jikọtara ya na isi mmalite ya). Na Martech, anyị na-ebugo ihe ọmụma mbụ ahụ na sava anyị n'ihi na anyị nwere ndị ọbịa ngwa ngwa yana nnukwu nnyefe ọdịnaya ọdịnaya (nke kwadoro site na CDN StackPath. Infographics bụ faịlụ buru ibu… yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ijere ha ozi na saịtị gị ugbu a, wee jiri koodu ha tinyere!
Na-akwalite Infographic! O zughi iji zipu ozi ala ma nwee olile anya na mmadụ ga - achọta ya. Ozugbo ị biputere infographic gị, kwalite ya ebe niile! LinkedIn, StumbleUpon, Twitter, Facebook, Digg, Reddit, Google +… ebe ọ bụla na ebe ọ bụla ị nwere ike ị nweta okwu ahụ, mee ya. Dee nyocha ndi siri ike ma obu nkowa ma jiri mkpado bu okwu ndi mmadu gha acho mgbe ha na acho ihe omuma a.
Ọ bụrụ na ị na-ekere òkè gị nwere ozi ederede, nyefee ya na saịtị dị ka View.ly maka ikpughe ọzọ. Ọzọkwa, tinye a mbipụta ndị nchụ nta akụkọ pụta na ya. Distributiongbasa mgbasa ozi mgbasa ozi mba ụwa nwere ike ịgba ọsọ ọtụtụ puku dollar mana ọ nweela ihe ịga nke ọma n'iwepụta saịtị nkọwa ha site na saịtị nwere ikike dị elu.
Jiri ohere nke infographics mee ka ọtụtụ ndị ọzọ na okporo ụzọ na ntị gị na saịtị ma ọ bụ blog. Ọ bụ atụmatụ na-arụ ọrụ!
Tags: zuta ihe omumaimewe ihe omumakesaa infographicschọta infographicsinfographic nkwaliteatụmatụ infographicinfographics isi mmalitejiri infographics mee ihekwalite infographicsihe kpatara infographics
Feb 9, 2012 n’elekere 8:33 nke abali
Douglas, achọpụtara m naanị infographics n'oge na-adịbeghị anya (nke kachasị site na Pininterest) ma nwee ekele maka nkọwa na akụrụngwa gị. Jiri obi ụtọ, Susan
Feb 9, 2012 n’elekere 11:28 nke abali
Daalụ nke ukwuu @ social_lady1: disqus!
Feb 26, 2012 n’elekere 8:52 nke abali
Ndewo, Douglas, nnukwu post, naanị chọrọ itinyekwu ndụmọdụ maka ndị na - agụ akwụkwọ gị. Nke mbu, AllTop maka Infographics (http://infographics.alltop.com/), ebe ị ga - ahụ blọọgụ dị elu na saịtị gbasara isiokwu a. Na anyị Visual Loop (http://visualoop.tumblr.com/), na-emechi ugbu a na 20.000 (!) Infographics si n'akụkụ ụwa nile.
Feb 26, 2012 na 5:49 PM
Ghọta ya, ka agbakwunyere!
@ NigelMF1: disqus Daalụ! M tinye ndị na ndepụta!
Ọ bụ Jullian Regina
Sep 16, 2015 na 1:02 PM
Di na nwunye edeputara! Otu n'ime ọkacha mmasị m bụ Alltop, maka infographics kwa mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile! Alltop nwere peeji maka ihe niile!